Digital & Mobiles
Jack N'Jill Flavor Free Toothpaste
အရသာ နဲ့ အနံ မျိုးစုံ ရနိုင်ပါတယ်
Goat Kids Organic Wash
22,000 MMK ~ 29,000 MMK
Choose500 ml300 ml
Milk & Co Baby Moisturing Cream
Mustela Body Lotion
Mustela ၏အရောင်းအကောင်းဆုံး Body Lotion
Healthy Care Paw Paw Baby Shampoo & Body Wash
ကလေးများအတွက် ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့် ရေချိုးရည်2in 1 ဖြစ်ပါတယ်။
There has no data.
Bellamy's Organic Milk Rusks 6+
Bellamy’s Organic သဘာဝနို့မုန့် ကြွပ်ပြားဟာာ100% သဘာဝဂျုံနှင့်ပြုလုပ်ထားပြီး လွယ်ကူစွာ ၀ါးစားနို င်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
Bellamy's Oganic Baby Rice 6+ Apple Porridge
Bellamy's Organic apple & cinnamon porridge ဂျုံဆန်မူန့်သည် organic လယ်ထွက်ပစ္စည်း (oat, ပာင်းဖူး)၊ ပန်းသီးဖျော်ရည်၊ သတ္ထူဓာတ် (iron)၊ ဗီတာမင် C တို့ပါဝင်တာကြောင့် ကလေးငယ်များ အတွက် အာဟာရပြည့်ဝပြီး အစာကြေလွယ်ပါသည်။ organic oats blended with organic grains
ChooseRice 6+ Apple
Bellamy’s Organic Vegie Macaroni 12+
သဘာဝစစ်စစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး pasta ထဲ၌ အသားဓာတ်များ ပါဝင်သော ကြောင့် စားသုံးရန် လွယ်ကူပါတယ်။
Bellamy's Macaroni 8+
Bellamy’s Organic Macaroni ဟာဆိုရင် ဂျုံဆန်လုံးညိုနှင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အခွံမာသီးအရသာ ရှိသော pasta ပုံစံနှင့်တူညီပါသည်။
Bellamy's Vegie Pasta 8+
Bellamy’s Organic Vegie Pasta ဟာဆိုရင် အသီးအရွက်ခြောက်များပါဝင်တာကြောင့် ကလေးများအတွက်အကောင်းဆုံး အာဟာရ ဖြစ်သည်။
ရင်ဘက်တွင်း ချွဲသလိပ်များကို အမြန်ဆုံး ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပစ်ပေးမှာက Sambucol Liquid
နွားနို့ အရသာဖြစ်သောကြောင့် ကလေးများ နှစ်သက်ကြသည်။ ကလေးများ၏ ကိုယ်ခံအားကို တိုးမြှင့်ပေးပြီး ကြီးထွားမှုကို တွန်းအားပေးသည်။
Nature's Way Kids Smart Iron+Vitamin C
ကလေးများကြီးထွားချိန်တွင် လိုအပ်သော Vitamin တွေပေးနိုင်ပြီး အစာစားလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Nature’s Way Vita Gummies Cold & Flu
ကလေးများ၏ ဖျားနာကူးစက်မှုကို ကာကွယ်သည်။
Baby များအတွက်ရေစသောက်ချိန်အလွန်အဆင်ပြေလွယ်ကူတဲ့ရေဗူးလေးပါ ။ (BPA free)
Oz kids water bottle
အလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရပြီး အဖွင့်အပိတ် လှည့်နေစရာမလိုတဲ့ ရေဘူးလေးဖြစ်ပါတယ်။
Choose480 ml (Pink)480 ml (Blue)480 ml (Yellow)
OZ kids lunch box bag
အလှပြင်ပစ္စည်း၊ ထမင်းဘူး၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ထည့်နိုင်သည်။
Choose24.5 x15 x 15.5cm(Pink)24.5 x15 x 15.5cm(BlacK)24.5 x15 x 15.5cm(Light Blue)24.5 x15 x 15.5cm(Dark Blue)24.5 x15 x 15.5cm(Purple)
Star Hardtop Pencil Case
အရည်အသွေးကောင်းပြီး ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများထည့်ဖို့ အလုံခြုံဆုံးနှင့် အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်ပါတယ်
Choose22.7 x 16.5 x 5.4 cm(Blue)22.7 x 16.5 x 5.4 cm(Purple)
Fantasy round pencil case
သယ်ရသုံးရလွယ်တဲ့ Fantasy round pencil case
Choose22 x7x7cm(Pink)22 x7x 7cm(Blue)
geronimo Stilton (Books)
The Tenth Adventure in the Kingdom of Fantsy
Write and Wipe Animals or Words
သားသားမီးမီးများ၏ ဉာဏ်ရည်တိုးတက်ဖို့အတွက် ပျော်စရာပညာပေးစာအုပ်နှင့် အသံပါဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။
E.C.E.C Clear UV Sunscreen Spray
SPF 50 PA++++ ဖြစ်တာကြောင့် နေလောင်ခြင်း၊ အသားမဲစေခြင်း၊ အသားရေအိုမင်းစေခြင်း၊ အရေပြားတွန့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်
Essential soothing care for sensitive and hyper sensitive skins, irritated or prone to allergy.
Chanel N-5 Spray
A wave of freshness that reveals the feminine and sensual chords of N ° 5. This deodorant mist subtly perfumes the perfume.
Natio Suncare SPF 50+ Roll On
Roll-on type အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး နေလောင်ဒါဏ်ကိုကောင်းစွာကာကွယ်ပေးသည် ။
အသားအရေကြည့်လိုက်တော့ ခြောက်ကပ်ကပ်ကြီးဆိုပြီး စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွက်တော့ အထူးရှယ် စိုပြေလိုးရှဲင်း..
Rouge Coco shine 57
Aventure lipstick 57
Chanel Rouge Coco Shine 91 Boheme
Sheer, shiny, colour-rich shades are effortlessly chic, infinitely wearable. Hydratendre Complex softens and plumps lips forahealthier, fuller appearance.
Rouge Dior Lipstick 080 Red Smile
The voluptuous Rouge Dior formula provides 16 hours of comfort without drying or colour streaking, in both matte and satin finishes. It includesaunique combination of "lip care" ingredients that target optimal comfort and lasting hold.
Chanel Lipstick Rouge Coco Shine 46
A lipstick withamelt-away balm texture that becomes fluid as soon as it touches the lips.
Dior Rouge 567,578
I created this Rouge Dior collection so women can choose and change shades to express themselves."—Peter Philips
Cemoy Hyaluronic Acid Repair Ampoule
Peptides ပါဝင်ပြီး နုပျိုလှပမှုနှင့် ကျန်းမာတဲ့ အသားအရေပိုင်ဆိုင်ဖို့ Cemoy Repair Ampoule
Choose50ml x 2
Thera Lady 24K Pure Gold Ampoule
ရုံးတက် အမျိုးသမီးများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အရေပြားရေဓာတ်ဖြည့်၊ အားသစ်လောင်း၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်၊ အရေးအကြောင်းများကင်းစင်စေပါတယ်။
Soy Facial Toner 200ml Japan
အသားအရေတောက်ပဖို့ Soy Facial Toner
Ego QV Gentle Shampoo
Ego QV Gentle Shampoo isamild and calming shampoo suitable for everyday use.
FicceCode Shampoo Shampoo & Hair Mask with Organic Macadamia Oil
ဆံပင်ကိုတောက်ပစေပြီး ဘောက်များသူတွေအတွက်နှင့် ဆံပင်ပျက်စီးနေတဲ့သူတွေအတွက်ပါ အထူးသင့်တော်သည်
FicceCode Shampoo and Hair Mask
ဆံပင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ FicceCode ရဲ့ Shampoo နှင့် Hair Mask များ အကောင်းဆုံးစုစည်းရာ။
ChooseShampoo ChamomileHair Mask ChamomileShampoo Cedarwood barkHair Mask Shampoo Cedarwood barkShampoo Tea TreeHair Mask Tea TreeShampoo Organic GingerHair Mask Organic Ginger
Jinda herbal Hair care Set
အောင်မဲညိုနဲ့ထောလပတ်ရွက်ကိုအဓိကထားပြီး ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ် အောင်မဲညိုကလဲ ဆံပင်အတွက်ကောင်းတယ် ဒါ့အပြင် ထောလပတ် အရွက်ကတော့ ပြောစရာမလိုအောင် ဆံပင်နဲ့ ပတ်သက်ရင် တအားသိသာတယ် ဒီလိုထူးခြားသိသာတဲ့ နှစ်ခုကိုရောပြီး ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
Tea Tree Everyday ခေါင်းလျှော်ရည်
Healthy Care Bitter Melon
သွေးအချိုဓာတ်များသူအတွက် insulin ကဲ့သို့ အကောင်းဆုံး သဘာဝ ကြက်ဟင်းခါးသီးဆေး။
Blackmores Fish Oil ငါးကြီးဆီ
39,500 MMK ~ 46,000 MMK
သွေးအဆီဓာတ် လျှော့ပေးပြီး သွေးကြော သွေးခဲခြင်းကို ထိန်းညှိပေးခြင်း
Choose200 Capsules400 Capsules
Unichi Rosehip Extract Complex Liquid +Pine Bark
နှင်းဆီသီးနှင့် ထင်းရှုးအခေါက်မှ ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် အရေပြားကိုကျန်းမာစေပြီး ပိုမိုတောက်ပစေပါတယ်
Choose30ml x 10
အသားအရည်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပြီး ဝင်းပဖြူဖွေးစေပါတယ်
Swisse Joint Repair
ဒူးအရိုးအကြော နာကျင်ခြင်းကို ထိရောက်စွာ သက်သာစေသည်။
Merchant: Trusty Shop Package
Travel Single Package
Travel Set Family Package
Single Small Package
SuMo Liquid Soap
SuMo Hand Sanitizer (Liquid)
Flowe Ship hand sanitizer
Flowe Ship hand sanitizer:
Merchant: JL Family Plywood
Brand: JL Family Plywood
16,000 MMK ~ 31,000 MMK
Funiture & Decoration
Choose5mm Two Face7mm Two Face18mm Two Face
41,000 MMK ~ 44,000 MMK
18,000 MMK ~ 29,000 MMK
12mm 8x4 Plywood
Choose12mm 8x4 Plywood
2.5mm 8x4 Ply
2.5mm 8x4 Plywood
Choose2.5mm 8x4 Plywood
3mm 8x4 Plywood
Choose3mm 8x4 Plywood
5mm 8'x4' Plywood
Choose5mm 8x4 Plywood
15,000 MMK ~ 16,000 MMK
10,500 MMK ~ 27,000 MMK
Inn/Kanyin Face Veneer
1,304,750 MMK ~ 2,225,750 MMK
Merchant: JL Family Timber Product
Species-100% Full Inn / Kanyin Thickness -0.3mm Grade- C&D , D1 , D2 Usability - used as face veneer for plywood production.
250,205 MMK ~ 260,950 MMK
Rubber core veneer Size - 1.65*630*1260 Moisture - 8%-12% Grade- A,B
291,650 MMK ~ 552,600 MMK
Species - Rubber Sawn Timber Grade - ABC , AB Sales - Local , Export
ChooseExport 20* 40/75* 450/900Export 42 * 42 * 450/900Export 52 * 52 * 450/900Export 58 * 58 * 450/900Local 50 * 50 * 850/900Local 52 * 52 * 850/900Local 58 * 58 * 850/900Local 63 * 63 * 850/900Export 63 * 63 * 450/900
Blurams Home Pro (A30)
Merchant: Trusty CCTV
Brand: Trusty Network & CCTV
Blurams Home Pro has serious processing power, so it can do things like tellaperson fromathing. And even recognize faces with blurams cloud services.
Blurams Dome Lite/Pro (A30C)
Human Detection (*Pro) You can be only informed when human intruder just appears in the view of camera.
Brurams Home Lite (A11)
Stay in touch with your loved ones The built-in high-sensitivity mic and high-fidelity speaker make two-way voice intercom clear and smooth, enabling you to chat with your family whenever and wherever you are
ChooseS/N - U23gn87ad12
Blurams Snowman (S15F)
Remote Pan & Tilt PTZ function for complete coverage of your home.
340,900 MMK ~ 383,900 MMK
Merchant: WiNn Mobile Yangon
Dimensions	156.7 x 74.3 x 8.8 mm (6.17 x 2.93 x 0.35 in) 191 g (6.74 oz)
ChooseK20 [6/128]K20 [8/256]
1,500,000 MMK ~ 1,700,000 MMK
Dimensions	143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in) 177 g (6.24 oz)
Choose64 GB256 GB
650,000 MMK ~ 698,000 MMK
The OnePlus 7T now has the 90Hz 'Fluid AMOLED' display that the industry was raving about. This can now be experienced inaslightly smaller form factor. Not only this, but OnePlus managed to getataller 20:9 display on the 7T, thus increasing its screen-to-body ratio. The notch is also 31.46% smaller, which helps the latter.
ChooseSilver 8/256GBSilver 8/128GBBlue 8/256GBBlue 8/128GB